Global Voices teny Malagasy » Madagasikara : Taorian’ny fandalovan’ny rivodoza Ivan, ireo takaitra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Febroary 2008 23:00 GMT 1	 · Mpanoratra Lova Rakotomalala Nandika Tomavana
Sokajy: Madagasikara, Tontolo_iainana, Voina
(sary nadika tamin'ny GAZETY_ADALADALA )
Araky ny tarehimarika ofisialy dia olona roa [monja !] no maty ary mahatratra 15'000 kosa ireo tsy manan-kialofana. Raha heverina amin'ny maha sokajy faha-4 ny rivodoza Ivan, izay narahina tafio-drivotra mihoatry ny 137 km/ora, dia maro ireo manontany tena izay tena antontan'isa [marina !] rehefa fantatra daholo ireo zava-nitranga rehetra. Arak'izay nomarihina eto  dia mitovy herisetra amin'ny rivodoza Katrina ity rivodoza ity.
Toy izao ny valintenin'ity mpiblaogy  iray raha nandre ny antotan'isa voaray :
Herimpo be tokoa no notanterahin'i Joan ny hamory eo amin'ny toerana tokana ireo fanampim-baovao rehetra hita sy re tamin'izay fomba rehetra naharaisana vaovao  mikasika ny rivodoza Ivan. Izay nitarika ny fanaovana saritanin'i Madagasikara  ahafahana indray-mijery manaraka ireo toerana farany nahazahoana vaovao sy ahitana rohy ahafahana mahafantatra bebe kokoa mikasika izany vaovao izany.
Torak'izany koa ny blaogy planete vivante  dia nanolotra fanampim-baovao matetika sady nanangona vaovao teo amin'ny saritany iray koa ahitana ireo faritra rehetra niharan'ny voina sady nanapariaka lahatsary mahafehy fehezanteny maro :
Nambaranay  teo aloha  fa olona miisa 9 no indray raikitra tao anatin'ny firodànan'ny hotely Anjara tany amin'ny nosy Boraha ary nambara fa maty avokoa izy ireo. Ity vaovao ity dia efa nampitampitain'ireo  radio maro  sy gazety maro vao notsipahin'ny fanjakana. Faly izahay naharay fanampim-baovao izay mitsipaka izany ka manambara ny fahaveloman'izy 9 mianadahy. I Jentilisa kosa dia mampitandrina  amin'ny lafy ratsin'ny fanapariahana ankamehana [maika laoatra] ireo vaovao izay tsy mbola nisedra famakafakana sy fanamarinana akory.
Ny fahamaivanan'ireo famonjena haingana sy ny fahasarotana ara-tserasera  sy ny fitondrana vonjy amin'ny fomba maika kosa no resahin'i Tomavana izay manontany hoe rahoviana vao :
Ny fisian'ny rafikajy ahafahana manaraka ny dian'ny rivomahery sy ny famisavisana izay toerana mety halehany  dia natolotr'i Harinjaka.
Sarotra ny maminany ireo voka-dratsy efa nihatra avy hatrany na ireo izay mbola andrasana, anefa dia kely fanantenana ihany ireo mpandinika. Efa tondraka sahady izao i Antanarivo. Arak'ity lahatsary napariak'i  avyalavitra ity dia ahiana na dia izay zavatra hiseho ao an-drenivohitra aza.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/02/20/628/
 valintenin'ity mpiblaogy: http://www.jir.fr/index.php?id_article=175532&page=article
 hamory eo amin'ny toerana tokana ireo fanampim-baovao rehetra hita sy re tamin'izay fomba rehetra naharaisana vaovao: http://www.purplecorner.com/?p=275
 saritanin'i Madagasikara: http://maps.google.ca/maps/ms?ie=UTF8&oe=utf-8&client=firefox-a&hl=en&msa=0&ll=-9.665738,54.492188&spn=25.146257,43.286133&z=5&msid=101265381665020407600.0004469b189021a442379
 planete vivante: http://planetevivante.wordpress.com/2008/02/19/cyclone-ivan-essai-de-premier-bilan/
 Upload your own: http://www.slideshare.net/upload
 teo aloha: https://www.globalvoicesonline.org/2008/02/18/madagascar-cyclone-ivan-wrecking-havoc/
 radio maro: http://www.radiodonbosco.mg/
 Ny fahamaivanan'ireo famonjena haingana sy ny fahasarotana ara-tserasera: http://tomavana.wordpress.com/2008/02/19/rivomahery-ivan-hiantso-vonjy-dia-iza-anefa-no-hantsoina/
 manaraka ny dian'ny rivomahery sy ny famisavisana izay toerana mety halehany: http://harinjaka.com/weblog/2008/02/18/surfez-le-cyclone-tropical-ivan-sur-google-earth/
 lahatsary napariak'i: http://www.flickr.com/photos/23374141@N04/page2/